बेनिफीबर बनाम मेटामुसिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी समाचार खेलहरु औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> बेनिफीबर बनाम मेटामुसिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
फाइबर स्वस्थ आहारको एक प्रमुख अंश हो। फाइबर मल त्याग र कोलोन स्वास्थ्य को लागी मद्दत गर्दछ। फाइबरले स्टूलमा थोक थप्छ र पानी समात्छ, स्टूलहरू पार गर्न सजिलो बनाउँदछ। स्वस्थ फाइबर सेवनको अन्य सम्भावित फाइदाहरू छन् जस्तै हृदय रोगको कम घटनाहरू, रगतमा चिनीको राम्रो नियन्त्रण, र स्वस्थ वजनको मर्मतको रूपमा।
फाइबर स्वाभाविक रूपमा तपाईले दिनहुँ खान सक्ने खाद्यहरूमा फेला पर्दछ। त्यहाँ फाइबरका दुई प्रकार छन्: घुलनशील र अघुलनशील। घुलनशील फाइबर अन्य सुक्ष्म चीजहरूमा सुक्खा सिमी, ओट्स, ओट ब्रान, सिट्रस फल, र स्याउमा पाउन सकिन्छ। घुलनशील फाइबर पाचन सुस्त गर्दछ र त्यसैले शरीर को चिनी को अवशोषण धीमा। घुलनशील फाइबरले फ्याट्टी एसिडहरूलाई पनि बाँध्छ र यसलाई शरीरबाट हटाउँछ, त्यसैले कम-घनत्वका लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ। अघुलनशील फाइबरले आन्द्राको पथमार्फत फोहोरलाई हाइड्रेट र परिवहन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले मल त्याग र पाचन प्रणाली स्वास्थ्य लाई बढावा दिन्छ। आहार स्रोतहरूबाट तपाईंको फाइबर प्राप्त गर्नु उत्तम हो किनभने यी भोजनहरू तपाईंको शरीरलाई चाहिने अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिएका हुन्छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईंको खानामा पर्याप्त फाइबर छैन भने, तपाईंले फाइबर सप्लीमेन्ट लिन आवश्यक पर्दछ जस्तै बेनिफिबर वा मेटामसिल।
बेनिफिबर र मेटामुसिल बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
बेनिफाइबर एक ओभर-द-काउन्टर (OTC) घुलनशील फाइबर पूरक हो। बेनिफिबरमा सक्रिय संघन गहुँ डेक्सट्रिन हो। बेनिफाइबरले आन्द्राको मार्गमा पानी अवशोषित गर्दछ। यो peristalsis वा दोहोरिने संकुचन र आंत मांसपेशी को विश्राम उत्तेजित गर्दछ। जबकि यो प्रक्रिया अन्तत: आंत्र सामग्रीहरु सार्दछ, यो आंत को माध्यम बाट पारगमन समय ढिलो। बेनिफाइबर प्याकेट वा बल्क प्याकेजि inको साथ साथै मौखिक वा चेवाबल ट्याब्लेटहरूमा पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ। त्यहाँ चिनी-रहित र ग्लूटेन-फ्री फॉर्मूलेसनहरू उपलब्ध छन्।
मेटामसिल एक ओटीसी घुलनशील फाइबर हो। मेटामसिल पाइसिलियम हब्सबाट बनिएको हो जुन भारतीय जडिबुटीको बीउबाट आउँदछ जुन प्लान्टागो ओभाटा भनेर चिनिन्छ। मेटामसिलले बेनिफाइबर, उत्तेजक पेरिस्टालिसिस, र आन्द्रा ट्रान्जिटलाई ढिलो गरेर काम गर्दछ। Metamucil प्याकेट वा बल्क प्याकेजि asको साथ साथै क्याप्सूलमा पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ। केहि फॉर्मूलेसनहरू चिनी रहित र ग्लूटेन-रहित पनि हुन्छन्।
बेनिफिबर र मेटामुसिल बीचको मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग फाइबर पूरक फाइबर पूरक
जेनेरिक नाम के हो? गहुँ डेक्सट्रिन साइकलियम
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? थोक पाउडर र पाउडर प्याकेट, मौखिक र चेइबल ट्याब्लेटहरू थोक पाउडर र पाउडर प्याकेटहरू, मौखिक क्याप्सूलहरू
मानक खुराक के हो? २ चम्मच3पटक दैनिक o ओज गिलास पानी वा स्पष्ट तरलमा १-२ गोल चम्चा चम्मच पाउडर3पटक दैनिक o ओज गिलास पानी वा सफा तरलमा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? अनिश्चितकालीन प्रयोगको केहि दिनहरू अनिश्चितकालीन प्रयोगको केहि दिनहरू
Metamucil मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Metamucil मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरू बेनिफिबर र मेटामसिल द्वारा उपचार गरिएको
बेनिफाइबर फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा एक आहार फाइबर पूरकको रूपमा अनुमोदित छ। मलमा थोक थप्ने क्षमताको कारणले, यसलाई अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ, वा एफडीए स्वीकृति बिना, कब्जको उपचार गर्नको लागि रेचकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मेटामसिललाई फाइबर आहार अनुपूरकको रूपमा र कहिलेकाँही कब्जको उपचारमा अनुमोदन गरिएको छ। स्टूलमा थोक निर्माण गर्ने मेटामसिलको क्षमताले मल त्याग्न मदत गर्छ जुन पार गर्न सजिलो हुन्छ। कोमोरिन हृदय रोगको जोखिम कम गर्न पनि मेटामसिललाई संकेत गरीन्छ। यो फ्याट्टी एसिडहरू बाँध्ने र शरीरबाट हटाउने क्षमताको कारणले हो, यसैले एलडीएल कोलेस्ट्रोल घट्दैछ। मधुमेह मेलेटसका बिरामीहरूमा रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न म्यामटुसिललाई अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ। एक यादृच्छिक, नियन्त्रण परीक्षण देखायो कि Metamucil इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोमको लक्षणहरु लाई कम गर्न पनि फाइदाजनक हुन सक्छ।
सर्त बेनिफिबर मेटामसिल
आहार फाइबर पूरक हो हो
कब्ज अफ-लेबल हो
कोरोनरी हृदय रोग जोखिम को कम हैन हो
रगत चिनी घटाउनुहोस् हैन अफ-लेबल
इरिटिएबल बोवेल सिन्ड्रोम हैन अफ-लेबल
के बेनिफिबर वा मेटामसिल अधिक प्रभावकारी छ?
TO क्लिनिकल समीक्षा २०१ 2015 मा प्रकाशित व्यावसायिक फाइबर उत्पादनहरू तुलना गरेर नियमित फाइबर थेरापीको स्वास्थ्य परिणामहरूको मूल्या to्कन गर्न खोजिएको। अन्वेषकहरूले वर्णन गर्छन् कि डेक्सट्रिन (बेनिफिबर) र साइकलियम (मेटामुसिल) बीचको प्रमुख भिन्नता भनेको डिस्ट्रिन सजिलै आन्द्रा मार्गमा किण्वित हुन्छ। एक पटक किण्वित गरेपछि डेक्सट्रिनले यसको पानी समात्ने क्षमता गुमाउँछ र त्यसैले प्रभावकारी रेचक छैन। साइकलियम किण्वित हुँदैन, र यसरी एक चिपचिपा, जेल-जस्तै स्थिरता हुन्छ र ठूलो आन्द्राभरि मलमा पानी समात्न सक्छ। यो एक हाइड्रेटेड, भारी मल प्रदान गर्दछ कि अधिक सजीलो उत्सर्जन गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, अमेरिकी ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजी क्रोनिक कब्ज टास्क फोर्सको कलेज प्रकाशित निष्कर्षहरू त्यो साइकलियम एक मात्र फाइबर पूरक हो जसले पुरानो कब्जको लागि संकेतलाई समर्थन गर्न पर्याप्त नैदानिक ​​प्रमाण देखायो।
अमेरिकी मधुमेह संघ प्रकाशितaमेटा-विश्लेषण २०१२ मा फाइबर सप्लीमेन्ट्स 'ग्लाइसेमिक नियन्त्रणमा प्रभावहरूको मूल्यांकन गर्दै। उनीहरूको खोजले सुझाव दियो कि साइकलियम जस्ता चिपचिपा फाइबरले ग्लाइसेमिक नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देखायो। Psyllium को चिपचिपा जेल गठन पाचन धीमा गर्दछ, चिनी अवशोषण धीमा हुन सक्छ। ढिलो पाचनको यस प्रभावले तपाईंलाई लामो समयको लागि पूर्ण रूपमा महसुस गर्दछ, वजन घटाउन सहयोग गर्ने जस्तो देखिन्छ।
एक अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रित परीक्षण २०१२ मा प्रकाशित हृदय रोगको जोखिम कारकको साथ किशोर पुरुषहरूमा LDL कोलेस्ट्रॉलमा साइल्लियमको प्रभावहरू मूल्याated्कन गरियो। प्रति दिन केवल g g को साइल्लियम थेरापीले कोलेस्ट्रोललाई विशेष रूपमा LDL लाई lower% ले घटाएको पाइयो।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सिफारिशहरू प्रदान गर्दछ कुन प्रकारको फाइबर तपाईको पेटको स्वास्थ्यको लागि उत्तम हो।
बेनिफिबरमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
बेनिफिबर मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र बेनिफीबर बनाम मेटामुसिलको लागत तुलना
बेनिफिबर एक ओटीसी पूरक हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक वा मेडिकेयर बीमाले ढाक्दैन। बेनिफाइबरको लागि विशिष्ट खुद्रा प्याकेजिंग २ 248 जीको बोतल हुनेछ, जसको किम्मत $ २१ सम्म लिन सकिन्छ। यदि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक बेनिफीबर को लागी एक प्रिस्क्रिप्शन लेख्छ भने, एकलकेयर बाट एक कूपन को मूल्य lower 15 भन्दा कम गर्न को लागी कम गर्न सक्दछ।
मेटामसिल एक ओटीसी पूरक हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक वा मेडिकेयर बीमाले ढाक्दैन। सामान्य प्याकेजि बक्स हुनेछ जुन am 44 खुराक प्याकेट मेटामसिल पाउडरको हुन्छ। सिंगलकेयरबाट आएको कुपनले लगभग १$ डलरको लागि मेटामसिल प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँदछ (तर, फेरि तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ)।
मानक खुराक २88 ग्राम पाउडरको बोतल १ बक्स, pac 44 प्याकेट
एकलकेयर लागत $ १-- $ १। $ १-- $ २।
सम्बन्धित: ओटीसी उत्पादनहरूको साथ एकलकेयर बचत कसरी प्रयोग गर्ने
बेनिफिबर बनाम मेटाम्यूसिलको साझा साइड इफेक्टहरू
फाइबर थेरापीको सबै भन्दा बढि साइड इफेक्ट भनेको पेट फूलन वा ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्र्याकमा ग्यासको निर्माण हो। बेनिफिबर र मेटामुसिलसँग सम्बन्धित प्रतिकूल घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ देखिन्छन्, तर पेट दुखाइ (क्रम्पि)) र ब्लोटि include समावेश गर्दछ। फ्रिक्वेन्सी परिभाषित गर्न गाह्रो हुन सक्छ चिकित्सा को लम्बाई र खुराक मा भिन्नता को कारण। मेटामसिल लिने बिरामीहरूले मतली र बान्ता, साथै श्वासप्रसार, वा घाउको रिपोर्ट गरेका छन्। विरलै, अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया देखा पर्न सक्छ।
तलका सूची सम्भावित साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले गरिएको छैन। सम्भावित साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि कृपया फार्मासिष्ट वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
फ्याटुलेन्स हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
पेट असुविधा हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
फुलेको हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
मतली n /an /aहो परिभाषित छैन
बान्ता n /an /aहो परिभाषित छैन
Asphyxia n /an /aहो परिभाषित छैन
मुहान: मेटामसिल , बेनिफिबर
बेनिफीबर बनाम मेटाम्यूसिलको ड्रग अन्तर्क्रिया
त्यहाँ बेनिफाइबर वा मेटामुसिलसँग कुनै ज्ञात ड्रग अन्तर्क्रिया छैन। मेटाकमिल जस्तै थोक बनाउने फाइबरले अन्य औषधीहरू कसरी अवशोषित गर्दछन् त्यसले असर गर्न सक्छ। निर्माताले सिफारिश गर्दछ कि तपाईले तपाईको मेटमसिललाई दुई घण्टा भन्दा पहिले वा दुई घण्टा तपाईको निर्धारित औषधि पछि लिनुहुन्छ।
बेनिफिबर र मेटामुसिलको चेतावनी
बेनिफाइबर र मेटामुसिल उत्पादनहरू पर्याप्त मात्रामा तरलताको साथ लिन महत्त्वपूर्ण छ। पर्याप्त तरल पदार्थ सेवन नगरी फाइबर थेरापी लिदा अन्ननलिका अवरोध र दम घुट्न सक्छ। यी उत्पादनहरु लिनुहोस् यदि तपाईलाई निल्न गाह्रो छ। यदि तपाईले छाती दुखाई, बान्ता, वा निल्न वा सास फेर्न कठिनाई अनुभव गर्नुभयो भने, तुरून्त चिकित्सकीय सहायता लिनुहोस्।
यदि तपाईंले सात दिन भन्दा धेरै समयसम्म कब्ज अनुभव गर्नुभयो वा यदि बेनिफाइबर वा मेटामसिल लिने बेलामा मलाशय रक्तस्राव अनुभव भयो भने, तुरून्त तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
बेनिफिबर र मेटामुसिल पाउडर ग्लुटन-रहित हुन्छन्, यद्यपि यी ब्रान्डले बनाएका केहि अन्य उत्पादहरू यो हुन सक्दैनन्। सेलिआक रोगका बिरामीहरूले लेबल पढ्नुपर्दछ र स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनु पर्छ उनीहरूले रोजेका फाइबर उत्पादनहरू सुरक्षित छन् भनेर निश्चित गर्न।
बेनिफिबर बनाम मेटामुसिलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
बेनिफाइबर के हो?
बेनिफाइबर एक ओटीसी घुलनशील फाइबर उत्पाद हो जुन आहार फाइबर अनुपूरकको लागि संकेत गरीन्छ। बेनिफाइबर एक दैनिक फाइबर पूरकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ मौखिक र चेइब्ले ट्याब्लेटहरूमा।
मेटामसिल भनेको के हो?
मेटामसिल एक ओटीसी घुलनशील फाइबर उत्पाद हो जुन आहार फाइबर अनुपूरकको लागि संकेत गरीन्छ। यो दैनिक फाइबर पूरकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र कहिलेकाँही कब्जको उपचार गर्नका साथै कोरोनरी धमनी रोगको लागि जोखिम कारक कम गर्न पनि यो संकेत दिइन्छ। मेटामसिल पाउडरको रूपमा मौखिक क्याप्सूलमा उपलब्ध छ।
के बेनिफिबर र मेटामसिल एकै हुन्?
बेनिफिबर र मेटामसिल दुबै फाइबर सप्लीमेन्ट हुन्, तर तिनीहरू समान हुँदैनन्। बेनिफिबरमा गहुँ डेक्सट्रिन हुन्छ र यो फाइबर पूरकको रूपमा मात्र स्वीकृत हुन्छ। मेटामसिलमा साइयलियम हुन्छ, र एक अनुमोदित फाइबर सप्लीमेन्ट हुनुको साथै, यसलाई एक थोक-रूपरेखा रेचकको रूपमा पनि अनुमोदित गरिएको छ। यसले फ्याटी एसिडहरूलाई कम LDL कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
के बेनिफिबर वा मेटामसिल अझ राम्रो छ?
Metamucil अधिक प्रभावी रेचक देखिएको छ किनकि यो मानव आँखामा किण्वित छैन भन्ने तथ्यका कारण। यसले आन्द्रा मार्गमा पानी समात्न अनुमति दिन्छ र पाचन सुस्त गर्दछ। ढिलो पाचन ग्लाइसेमिक नियन्त्रण र तौल घटाउन पनि मद्दत देखाइएको छ।
के म गर्भवती हुँदा बेनिफिबर वा मेटामसिल प्रयोग गर्न सक्छु?
पर्याप्त तरल पदार्थ सेवनको साथ, दुबै बेनिफाइबर र मेटामुसिल सेवन गर्न सुरक्षित छ जब तिनीहरू गर्भवती भएको खण्डमा रक्तप्रवाहमा अवशोषित हुँदैनन्।
म रक्सीको साथ बेनिफिबर वा मेटामसिल प्रयोग गर्न सक्छु?
बेनिफिबरसँग मदिराको प्रयोग contraindated छैन, यद्यपि रक्सी जहिले पनि सुरक्षित तरिकाले सेवन गर्नुपर्दछ। तपाईको पाउडर फाइबर सप्लीमेन्टमा मिसिनको लागि तरल पदार्थ छनौट गर्दा, मदिरा सिफारिस गरिदैन।
कुन फाइबर पूरक उत्तम हो?
मेटामसिललाई अधिक स्वास्थ्य लाभहरू समग्रमा बेनिफिबरको रूपमा देखाइएको छ। फाइबर सप्लीमेन्ट हुनुको साथसाथै, मेटामसिल एक थोक बनाउने रेचक एक प्रमाणित हो। एलडीएल कोलेस्ट्रोल घटाएर मुटु रोगलाई कम गर्न पनि देखाइएको छ। पाचन समयलाई सुस्त बनाउनमा यसको प्रभाव ग्लाइसेमिक नियन्त्रण कायम राख्न मद्दत गर्दछ र वजन घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
बेनिफाइबर लिनेको साइड इफेक्ट के हुन्छ?
बेनिफाइबर पेट फूलिएको वा गैस निर्माण आंतो पथमा बढ्न सक्छ। यसले पेटको ऐंठन वा असुविधा र ब्लोटिंग को घटना बढाउन सक्छ।
के यो हरेक दिन मेटामसिल लिन सुरक्षित छ?
यो प्रति दिन पेटको स्वास्थ्यको लागि मेटामसिलमा सुरक्षित हुन्छ जबसम्म तपाईं पर्याप्त तरल पदार्थ उपभोग गर्नुहुन्छ। Metamucil लिन रोक्नुहोस् र आफ्नो चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाईं सात दिन भन्दा बढी कब्जको अनुभव गर्नुहुन्छ वा मलाशय रक्तस्राव छ।
तपाईंले खाना खानु भन्दा अघि वा पनी फाइबर लिनु पर्छ?
तपाईं आफ्नो फाइबर लिन सक्नुहुन्छ अघि, समयमा, वा खाना पछि। फाइबरलाई मधुमेहको लागि सहायक उपचारको रूपमा लिँदा अध्ययन धीमा पाचन र भोक कम गर्न मद्दत गर्नको लागि तपाइँको खाना सुरू गर्नु अघि लिने सुझाव दिन्छ।
डिफ्लुकन लाई खमीर संक्रमण लाई निको पार्न कति समय लाग्छ?
प्रोबायोटिक्स के हो र उनीहरु कसरी काम गर्छन्
गर्व गर्छ एप्पल साइडर सिरका उच्च रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्दछ
कति 200mg ibuprofen म एक पटक मा लिन सक्छु